IBSA EJJENNOO QEERROO BILISUMMAA OROMOO BAHA OROMIYAA – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIBSA EJJENNOO QEERROO BILISUMMAA OROMOO BAHA OROMIYAA
Addunyaa tanarra namoota baayyeetu jiraata. Isaan kana hunda garuu uumaan kan uume akkasaan bilisaan jiraatanifi. Oromoonis akkuma uummata addunyaa kan biraa bilisaan akka jiraatuuf uumamullee waggoota dhibbaafi shantamaa(150) oliif dhiibbaa sirni nafxanyaa biyyoota alaa gargaarsifachuun irratti godhaa turaniif hacuucamaa turuun isaa ni yaadatama. Ta’uus garuu sabni kun guyyaa tokko dhiibbaa kana tole je’ee fudhatee hin beeku kanaaf ragaan hedduutu jira. Fkn gaafa minilik ummata kana bituuf itti dhufu calanqoofi aanooletti falmachaa akka ture diinnis firris ragaa ni baha. Sirnoota darban kan biraa keessalle akkasuma falmachaa ture.garuu sababa gantoota saba kana keesaa bahaniitin qabsoon saba kana hanga darbee nu gahutti galma barbaadame osoo hin gahin hafe. Dhiyeenyuma kana erga QBO hundeeffamelle qabsoon sabni kun QBO waliin tahuun godhan yeroo galma gahinsa jala gahutti gantootaafi warra natu isiniif beeka jedhaniin waraabeessa lammaffaatti dabarfamee laatame. waraabessi lammaffaan kun ammoo kan ilaalchaa fi kaayyoo minilik ganamaa kan nafxanyoonni ummata keenya lafarraa dhabmsiisuuf baafatan qabachuun ummata keenyarratti gochaalee gara jabummaa kanneen akka jilmaan fixuu, qaama hirrisaa, haadhafi abbaa ilmaanirraa ajjeesanii ilmaan hiyyoomsaa, mana fi ilma oromoo ajjeesanii waraabessa nyaachisaa kan jirufi gochaalee gara jabinaa hangana hin jedhamne raawwachaa yeroo jiru kanatti QBO ija ittin miidhaa saba kanaa ilaalu waan hin qabneef gara warraaqsaatti deebi’e gabroomfataa afaan qaratee saba keenyarratti bobba’e saba duguugaa jiru kana ofirra fonqolchee biyya oromiyaa walabaa ijaruuf
WARRAAQSA GALAANA UMMATAA (dhaadannoo Oromoon galaanaa irra dhangalaana) jedhuun bifa haarayaan gara imala qabsoo bilisummaa Oromootti deebi’un imalasaa kan itti jiru yeroo tahu warraaqsi amma kun kan inni irratti xiyyafatu.
Waajiraalee fi qabeenya mootummaa kanaa bifa miidhaa ummatarra hin geeysifneen daareysuun ykn ballessuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolchu!
Miseensoota diinaa fi basaastoota isaaniin bobbafamanirratti tarkaanfii laalessaa fudhachuu.
Karaalee sochiin diinaa irratti heddumaatu cufuu, qabeenya mootummaa kanneen akka ibsaa fi teelee barbadessuu.
Meeshaalee diinaa dhunfachuun qabsoo bilisummaa Oromoof oolchu yoo hin danda’amne ammoo gubuu fi diinootarratti tarkaanfii hammeenyaa fudhachuu faa dha.
Oromoon saba guddaadha.sabni guddaan kun dhiibbaan diinaa itti baayyatullee bilisummaa isaaf galma hanqisuu hin danda’u “saba kana galmasaa hanqisuu yaaduun aduu harka tokkoon dhaamsuu yaaludha” ykn “galaana gogsuu yaaludha”.sabni galaanni kun diinoota fi gufuu qabsoo keenya karaarraa ciree galmasaa gahuun dhiyeenyatti akka irraa dhangalaanu mirkana.
Gatii barbaachisu kaffallee dhiiga keenyaan Oromiyaa bilisa baafna.
QBO Baha Oromiyaa irraa.
Injifannoon ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaa Oromooti.!!!!
Baha Oromiyaa waxabajjii 06/2020